IQOO Z1 gosipụtara na Geekbench na Dimensity 1000+ | Gam akporosis
Ike nke Mediatek ọhụrụ Dimensity 1000+ chipset gosipụtara site Geekbench na iQOO Z1
El Njupụta 1000+ ọ bụ otu n'ime chipsets kachasị ọhụrụ site na Mediatek. Emere nke a n'okpuru izu abụọ gara aga dịka otu n'ime nhọrọ nhọrọ etiti. adịchaghị taa, imeziwanye ihe anyị chọtara na mbụ Dimensity 1000, nke emere ka ọ bụrụ ọrụ na Nọvemba nke afọ gara aga.
Ihe nhazi a maka smartphones abatabeghị na ekwentị ọ bụla, mana ọ nwere hụrụ na benchmark Geekbench, ihe anyị ga-ekwu maka ya na nke ọzọ.
Dimensity 1000 + na-egosi, maka oge mbụ, na benchmark
Branddị akara nke yiworo ya tupu ọ bụla bụ Vivo. Kpọtụrụ, iQOO Z1, otu n'ime smartphones ndị na-esote ya nke kwesịrị ịhụ ìhè nke ụbọchị na ahịa, bụ nke kwadebere ya. A bịara mara ebe ọnụ ya na nchekwa data dị ka "vivo V1986A", nke gosikwara na anyị nọ nso ịmara ya. The smartphone ga-amalite na ahịa nke a na-abịa na May 19, otu ụbọchị ahụ anyị ga-amata ihe niile gbasara ya.
Nsonaazụ sitere na Dimensity 1000+ dị mma na-atọ ụtọ. Na otu-isi nke ọ nwetara ihe 784, ma na multi-core ule ọ na-enwe ike iji nweta ihe magburu onwe 3.085 ihe. Nsonaazụ abụọ dị ka nke chipsets Kirin 990 sitere na Huawei na Snapdragon 865 sitere na Qualcomm, nke, n'otu n'otu, emerela na mbụ na Geekbench nchekwa data nwere ihe 770 na 3.147 (Huawei Mate 30 Pro 5G ekwentị mkpanaaka), na 908 na 3.259 (Motorola Edge Gụnyere).
iQOO Z1 na Mediatek Dimensity 1000+ na Geekbench
Nọmba ndị akpọrọ Mediatek processor ọhụrụ akpọrọ ya na ndị nke ọkọlọtọ SoC ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Agbanyeghị, a na-ahụta igwe eji agagharị agagharị dị ka otu n'ime agwa tozuru oke adịchaghị, na ọ bụghị dị ka nke anyị ga-ahụ na-enwe ọganihu na flagship smartphones nke kasị elu arụmọrụ. N'agbanyeghị nke a, o doro anya na ọdịiche dị n'etiti nke a na abụọ nke chipsets adịghị oke ọkọlọtọ ike kachasị ugbu a.
Ma iQOO Z1, ndepụta ahụ kọwara n'ụzọ doro anya na anyị na-eche ihu na ngwaọrụ nke na-enye 7,21 GB RAM, nke ga-emesị chịkọta ya dị ka 8 GB ozugbo a malitere ya. N'otu oge ahụ, sistemụ arụmọrụ ya ejiri nwalee ya bụ gam akporo 10, nke kacha nta anyị na-atụ anya site na ngwaọrụ ọhụrụ 2020 na gam akporo 11 naanị n'akụkụ nkuku.
E nwere ugbua ọtụtụ leaked data n'oge gara aga nke Vivo si iQOO Z1. O doro anya na, ọnụ, dị ka egosiri site na akara nke sub-brand iQOO, ga-abụ egwuregwu nwere ọtụtụ ọrụ egwuregwu na usoro dị elu dị jụụ maka ikpo ọkụ ọkụ na ihe ọghọm efu mgbe ị na-egwu ogologo oge. Nke a bụ ihe Dimensity + kwadoro, nke enyerekwa njikarịcha maka arụmọrụ egwuregwu na-enweghị atụ.
Ọ bụ kwuru na, dị ka Red Ime Anwansi 5G, Nubia Gwuo 5G y iQOO Neo3, ga-enwe ngosipụta ume ọhụrụ dị elu nke ga-akụ akara 144Hz, yabụ ị nwere ike ime ka onyinyo ahụ nwee ume ruo 144 ugboro kwa sekọnd (fps), ihe ga-abụ nnukwu mgbakwunye maka ndị egwuregwu. Ọ ga-enwekwa nkwado maka teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa 44 W yana ikike batrị 4,500 mAh.
Dị ka anyị kwuru, IQOO Z1 ga-ebido na Tuesday, Mee 19. A na-atụ anya ka ọnụ ahịa ya dị na yuan 2.498 (~ 326 euro ma ọ bụ $ 352 na ọnụego mgbanwe) maka ụdị a na 6 GB nke RAM na 128 GB nke ebe nchekwa dị n’ime. Ebe ọ bụ na e nwere ihe dị iche iche nke 8 GB nke Geekbench gosipụtara, anyị nwere ike ịnata ihe atụ na 256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime; ọ dịghị ihe a maara banyere ọnụahịa ya nke ụdị a, mana ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ọ ga-aka ọnụ. Na mgbakwunye na nke a, China ga-abụ obodo mbụ enwere ike ree ya, si otú a na-ahapụ Europe na ahịa ndị ọzọ nke mba ụwa na njikere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ike nke Mediatek ọhụrụ Dimensity 1000+ chipset gosipụtara site Geekbench na iQOO Z1
Nzukọ Google karịrị nde nbudata iri ise